यी हुन् सामाजिक सञ्जालका बादशाहहरू - Aarthiknews
काठमाडौँ। आधुनिक डिजिटल संसारमा सामाजिक सञ्जालमा पहुँच हुनु भनेको एक प्रकारको विशाल शक्ति हातमा हुनु हो। उदाहरणको लागि, ट्विटरमा सबै भन्दा धेरै 'फलोअर्स' अनुयायीहरू जो सँग छ उसले जस्तोसुकै सन्देश सजिलै फैलाउन सक्छ। जबकि इन्स्टाग्राममा धेरै फलोअर्स भएकाहरूले विज्ञापनदाताबाट राम्रो पैसा कमाउन सक्छन्।
त्यसैले सामाजिक सञ्जाल पनि शक्तिको एक मध्यम हुन सक्छ। धेरै सेलिब्रेटीहरूले आफ्नो प्लेटफार्महरूमा ठुलो अनुसरणकर्ता रहेको घमन्ड पनि गर्छन्। सोसल मिडियाले पहिले अज्ञात व्यक्तित्वहरूलाई युट्युब वा टिकटकको माध्यमबाट प्रसिद्ध पनि बनाएको छ। त्यस्ताले आफ्नो त्यो पहुँचलाई शक्ति र प्रभावको स्रोतमा बदलेका पनि छन्।
सामाजिक मिडियाको दुनियाँमा को सबैभन्दा शक्तिशाली होला ? इन्स्टाग्राम, ट्विटर, वा अन्य नेटवर्कमा भिन्दा भिन्दै कसका बढी फलोअर्स छन् भनेर हेर्नुको सट्टा सबै मुख्य प्लेटफर्महरूमा संयुक्त रूपमा को बलियो भनी गरिएको अध्ययन को रिपोर्ट रोचक छ।
कसका फलोअर्स सर्वाधिक ?
अप्रिल २०२१ सम्ममा सामाजिक मिडियामा शीर्ष प्रभावकर्ताहरूको सुची बनाउन सबै चर्चित प्लेटफर्महरूमा सबैभन्दा धेरै अनुसरण गरिएका खाताहरू हेरिएको छ।
ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, युट्युब र टिकटकमा सबैभन्दा धेरै अनुयायीहरू खेलाडी, सङ्गीतकारहरू, राजनीतिज्ञहरू, र अन्य व्यक्तित्वहरूको रहेको देखिएको छ।
अचम्मको कुरा त यो छ कि सेलिब्रेटीहरूको नै सोसल मिडियामा सर्वोच्च शासन देखिन्छ। अप्रिल २०२१ सम्ममा फुटबल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगभग ५ मिलियन कुल अनुयायीहरूको साथ सोसल मिडियामा सबैभन्दा धेरै अनुसरण गरिएको व्यक्तिका रूपमा देखिएका छन्।
तर, यो सूचिमा वर्चस्व भने सङ्गीत क्षेत्रका मानिसहरूको छ। ठुला र विविध फ्यान बेसको साथ कलाकारहरूले ५० जना सर्वाधिक फलोअर्सको सूचिमा आधा हिस्सा ओगटेका छन्।
इन्स्टाग्रामको शक्ति पनि अत्यन्तै ठुलो देखिएको छ किनकि यसैको कारण कार्डाशियनहरू र जेनर जस्ता टिभी पर्सनालिटीले समेत सोसल मिडियामा प्रसिद्धि कमाएका छन्।
त्यस्तै गरी टिकटकमा सबैभन्दा धेरै फ्लोअर्स भएका स्टार चार्ली डी'अमिलियो छन् भने युट्युबमा व्हिन्डरसन नुनस बटिस्टा, जर्मेन गरमेडिया, र फेलिक्स "पेवडीपी" केजेलबर्ग आदी अगाडी छन् ।
राजनीतिज्ञहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशाली बनेका छन् । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाको ट्विटरमा सबैभन्दा बढी अनुयायीहरू छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सोसल मिडियामा १७५ मिलियन भन्दा बढी अनुयायीहरू छन्।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जनवरी २०२१ मा सामाजिक सञ्जालका बहु प्लेटफार्ममा प्रतिबन्ध लाग्नु अघि १४० मिलियन भन्दा बढी अनुयायीहरू थिए ।